Tag: manage subscriptions | Martech Zone
Tag: jikwaa ndenye aha
Ọnwa ole na ole ọ bụla, achọrọ m ịgafe ozi ịntanetị m ma bido wepụchaa ihe niile. Site na nyiwe nwalere m, na ọkwa mmekọrịta na akwụkwọ akụkọ - igbe m juru n'ọnụ. Ana m eji ụfọdụ ezigbo ngwaọrụ iji nyere aka jikwaa ya, dị ka Mailstrom, mana ọ ka bụ ntakịrị njikwa. Unroll.me dị ebe a iji nyere gị aka ịmaliteghachi ịchịkwa igbe mbata gị. Kama ịnata ọtụtụ ozi ịntanetị ndenye aha ụbọchị niile, ịnwere ike ịnata naanị otu.